ZANU-PF gives Mwonzora and Khupe another reason to fight | The Insider
More half the coronavirus cases in Zimbabwe now in two...
The ruling ZANU-PF and opposition Movement for Democratic Change are expected to receive $500 million, which will be disbursed soon in compliance with some provisions of Zimbabwe’s Political Parties (Finance) Act.
Justice Minister Ziyambi Ziyambi announced in a government gazette that the ruling party is expected to get over $350 million and the MDC led by Douglas Mwonzora almost $150 million.
“The money shall be disbursed to political parties that qualify in terms of Section 3(2) of the Act as follows: Three hundred and fifty million, one hundred and fifty thousand Zimbabwean dollars ($350,150.000) shall be paid to the Zimbabwe African Union Patriotic Front (ZANU PF), which received 70.03% of the total votes casted; and one hundred and forty-nine million, eight hundred and fifty thousand Zimbabwean dollars ($149,850.000) shall be paid to the Movement for Democratic Change (MDC), which received 29.97% of the total votes casted.”
But Ntando Ndlovu, one of Khupe’s advisers, said, “Khupe announced on last Friday that the MDC-T has split and therefore this money should be split equally among these two groups.”- VOA